MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA XADKA BEAGLE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Xadka Beagle
Xudduudka Collie / eeyaha Isku-dhafan ee Isku-dhafan
Macluumaad iyo Sawiro
Meeko the Beagle Border at 1 sano jir— 'Meeko waa kala badh Gorgor badh Soohdinta Collie . Isagu waa eeyga ugu fiican ee aan abid leeyahay! Isagu waa cunug, ciyaar badan, isboorti iyo caqli badan. Ma ciyo oo wuu qurxoon yahay akhlaaq wanaagsan . Wuxuu leeyahay tamar badan ku xigeenkiisuna waa dadka ku boodaya markuu faraxsan yahay.
Ciyaar Dog Waxyaabaha xun!
Tijaabooyinka DNA Dog
Beagle Border ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Soohdinta Collie iyo Gorgor . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
ACHC = Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka
DRA = Diiwaanka Eyga ee Mareykanka, Inc.
Meeko the Beagle Border at 1 sano jir
Meeko the Beagle Border sida eey
'Kani waa sawir aan ka qaaday isku-darka cusub ee Xadka Collie / Beagle, Scruffy. Scruffy waa dheddig, qiyaastii 6-7 bilood jir. Waxaan haynaa iyada bil ah. Waxaa 'laga badbaadiyey' qoys aan si wanaagsan ula dhaqmin, marna iyada oo socon oo u oggolaan carruurta in ay gabi ahaanba ku xadgudbaan iyada. Qoysku waxay ku andacoodeen inay ka takhalusi doonaan iyada oo ah 'mid aan la baran karin' oo xitaa lama wada kireyn karo. Markii aan u tagay si aan u eego iyada waxaan isla markiiba jeclaaday indhahaas Beagle, murugo laakiin aad u caqli badan. Waxaan u keenay gurigeeda sidii hadiyad dhalasho goor hore oo aan u keenay awowgay oo nala nool. '
'Ma dareemayo in eeygu yahay canine isku dheelitiran ... weli. Waan ka shaqeyneynaa, inkastoo. Scruffy badanaa waa xishood badan yahay wuxuuna leeyahay cabsi badan, gaar ahaan qeylada iyo dadka qalaad. Waxay soo martay waddo dheer bishii ay nala joogtay. Wax badan kama aqaano 5-ta bilood ee nolosha Scruffy nolosheeda laakiin waxaan ogahay inay hada ku jirto qoys wanaagsan oo isjecel. Iyadu waa cayaaryahan, arday pup firfircoon laakiin marna dagaal badan. Qof walbaa wuu gaari karaa saxankeeda cuntada inta ay wax cuneyso waana iska soo celin doontaa si aad ula wadaagi karto kibbleheeda. Anigu waxaan ahay tababare bilaa aqoon ah, oo aan la noolayn eey in ka badan 12 sano, laakiin aniga iyo iyaduba waanu wada baranaynaa. Toddobaad gudihiis markii ay noo timid iyada ayaa si buuxda guriga u wada joogtay, bil ka dibna way fadhiisan kartaa, jiifsan kartaa, fadhiisan kartaa, hoos u dhigi kartaa oo amarka ayay uga tagi kartaa. Waan ka shaqeyneynaa ciribtirid iyo ku dul socosho xadhig . Waxaan sidoo kale baranayaa inaan ula dhaqmo iyada sida eey, oo aan aadanaha ahayn oo aanan dhigin cadaadiska ah inay noqoto hogaamiyaha baakadka garbaheeda yar . '
'Scruffy waa arday si dhakhso leh wax u barta laakiin si fudud u mashquulsan. Waxaan u maleynayaa inay aheyd inay si buuxda u ilaaliso gurigeeda hore si ay uga ilaaliso dhaawaca caruurtooda. Waxaan hayaa wiil 3-sano jir ah oo baranaya inuu noqdo mid jilicsan oo aan u jeclaan Scruffy si xamaasad leh. Iyadu aad bay ula ciyaareysaa isaga laakiin waxaan si taxaddar leh u ilaalinaa in midkoodna la qaadin. Waxaan joojinay inaan ciyaarno markii midkoodkood ciyaaro. Waxay si dhakhso leh u baranayaan inay wada noolaadaan oo ay saaxiibo noqdaan. '
'Waxaan daawaday showga Cesar Millan eey Dog Whisperer dhowr jeer oo la soo dhaafay waana jeclahay qaababkiisa dhaqan celinta eeyaha ... iyo tababarka dadka. Waxaan daawadaa fursad kasta oo aan hadda helo! Waxaan dhammeeyey buugga Cesar ee 'Xeerarka Cesar' mana sugi karo inaan bilaabo fulinta qaar ka mid ah waxyaabihii aan soo bartay. Waxa ugu horeeya ayaa ah in Scruffy la siiyo jimicsi dheeri ah iyo socod badan. Waan ka labalabeynayey inaan ku soo raaco socodkeeda xaafadda maxaa yeelay iyadu bulsho badan ma ahayn oo waxay u baahan tahay shaqo badan oo xadhig ah. Waxaan dhawaan helay dariiqyo socod ah oo gurigayga agtiisa ah oo aan aad loo isticmaalin waqtigan sanadka sidaa darteed laga bilaabo berrito waxaan wiilkeyga iyo eeygeyga '' pack pack '' ku kaxeynayaa maalin kasta. Waxaan sidoo kale ku ciyaarnaa keenista deyrkeena deyrka maalin kasta waxayna iyadu la ciyaareysaa 'cayrsasho' wiilkeyga oo aan joogsi lahayn, gudaha iyo dibaddaba.
sida weyn samayn retrievers dahab ah mini heli
'Ilaa iyo hada, Scruffy wuxuu umuuqdaa mid ku faraxsan kaliya inuu haysto meel jilicsan oo lagu jiifsado iyo codad naxariis leh oo la maqlo. Waxay jeceshahay, jeceshahay, waxay jeceshahay inay wax cunto! Cunugeyga 3-sano jirka ah wuxuu lammaane u noqday dambiga, isagoo si dhuumaaleysi ah ugu daweynaya fursado kasta oo uu helo. Cunnadeeda ugu xiisaha badan adduunka waa farmaajo! Waxay samayn doontaa wax kasta oo aad ka codsato iyada oo ah farmaajo. Waa wax lagu farxo in iyada lagu dhex mariyo tallaabooyinkeeda ... hoos, istaag, fadhiiso, fadhiiso ... oo aan daawado ilmahayga 3-jirka ah oo si toos ah uga garab ciyaaraya gabalkiisa farmaajo, sidoo kale. '
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan go'aansanay inaan qaadanno eeygan yar. Waxay mar horeba siisay wax badan oo midkeen kasta oo aan abidkeed siin karno. Ma aqaan sida aan muddo dheer u noolaan jirnay eey! '
Liiska eyga isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Beagle Mix Breed'
Liiska eeyaha Xadka ee Collie Mix
Macluumaadka Eyga Isku-dhafan
Fahmitaanka Dabeecadda Eyga
Liiska eeyaha Ingiriisiga Mastiff Mix Mix
Macluumaadka Taranka Yar ee Poodle Dog
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Kerry Blue Terrier Dog
American English Coonhound Information Ey Macluumaadka iyo Sawirada
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Rottle iyo Sawirada
Rhodesian Ridgeback Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Coton De Tulear Dog Sawirada Sawirka, 1
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Cairn Beagle
Macluumaadka loo yaqaan 'Shel-Aussie Dog' iyo Sawirada
mini doberman iyo isku dhafka chihuahua
flat isku darka shaybaarka sarkaal dahaarka
pinscher Ghadafi iyo isku dhafka pug
pictures of spaniels toy ingiriisiga
king charles iyo iskudhafka bichon